Sawirro: Aadan Madobe oo kulamo ka wada Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Aadan Madobe oo kulamo ka wada Muqdisho
Sawirro: Aadan Madobe oo kulamo ka wada Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa maanta kulan la qaatay sii-hayaha safaaradda Norway ee magaalada Muqdisho Haakon Svane.
Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo doorka wakiilada beesha caalamku ku leeyihiin hanaanka geedi socodka nabada iyo horumarinta Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa kulankan ku wehlinayay wakiilka gaarka ah ee wasaaradda arrimaha Dibadda ee Norway u qaabilsan Soomaaliya Heidi Elburgi Johansen.
Wakiilada ka socda Norway ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya la wadaagay hambalyo iyo Salaan ayaga oo ugu Hambalyay doorashada Guddoomiyaha, asiga oo xilkaas uu ku guuleystay 27 April 2022.
Guddoomiye Aadan Madoobe ayaa dhankiisa ku bogaadiyay doorka wakiilada beesha caalamku ay ku leeyihiin hannaanka geedi socodka nabada iyo horumarinta Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Golaha Shacabka BFS.
Kulankaan ayaa qeyb ka ahaa kulamo uu maalmihii dambe magaalada Muqdisho ka waday Guddoomiye Aadan Madoobe, kuwaasi oo uu kula kulmayay qaar ka mid ah wakiilada Beesha Caalamka.
Shalay ayey aheyd markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) uu xafiiskiisa kulan gaar ah kula yeeshay danjiraha dowladda Imaaraadka Carabta, Mohamed Ahmed Othman Al Hammadi.
Soomaaliya ayaa xiligan isku diyaarineysa inay ka baxdo xaalada kala-guurka oo ay ku daah-day, ayada oo loo ballansan yahay 15-ka bishaan inay dhacdo doorashada madaxweynimada.